Faah faahin:- Nin qarax ku farsameeynayay guri ku yaalla Kismaayo oo gacanta lagu dhigay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nin qarax ku farsameeynayay guri ku yaalla Kismaayo oo gacanta lagu dhigay (SAWIRO)
Waxaa maalintii shalay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose lagu soo bandhigay nin ka tirsan Xarakada Al-shabaab oo waxyaabaha qarxa ku diyaarinayay guri ku yaalla magaaladaas.
Ninkaan oo la sheegay inuu ka tirsan yahay Al-shabaab ayay ciidamadu nabad-suggidda muddooyinkii ugu dambeysay ku raad-joogeen, wuxuuna qorshihiisu ahaa inuu weerar xoog leh ka geysto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Taliye ku-xigeenka ciidamada nabad-suggida ee maamulka Jubbaland Axmed C/laahi Ciise Gaas oo goobta ninkaasi lagu soo bandhigay saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay ninkaasi in lasoo qabtay xilli uu isku dayay inuu baxsado, balse ay ciidanku rasaas ku fureen.
Wuxuu sidoo kale taliye ku-xigeenka sheegay in ninkaan ay ku wareejinayaan maxkamada ciidamada maamulka Jubbaland, si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado.
Ninkaasi ayaa waxaa ka muuqday dhaawac kasoo gaaray howlgalkii lagu soo qabtay.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan xubnaha ka tirsan Xarakada Al-shabaab ayaa qaraxyo iyo dilal qorsheysan waxay ka fulliyaan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, kaas oo ay ku bar-tilmaameedsadaan mas’uuliyiinta ka tirsan maamulka Jubbaland.